साढे दुई महिना बन्धक बनाएर बलात्कृत महिलाको यसरी भयो मृत्यु :: NepalPlus
प्रतिमा सिलवाल/ चितवन २०७९ असार ७ गते १८:२९
टिसर्ट र जिन्स पाइन्टमा झरेकी महिलाको कपाल जिङ्ग्रिङ्ग थियो। ज्यान सुकेर मुठ्ठी भर भएको। ति मानिसहरू झट्ट भीमकुमारीले चिन्न सकिनन् । तर, उनीहरू आफ्नै घरतिर आइरहेका थिए। भीमकुमारीले अड्कल गर्दै गर्दा, भाउजू सम्बोधन गरिन्, तिनै महिलाले।
उनको स्वभाविक जवाफ थियो, ‘बिरामी भएँ भाउजू ।’
उनी अर्थात् २७ वर्षकी नन्द एक्लै आएकी थिइनन्। आफ्ना कुरा राम्रोसँग भन्न पनि उनले सकिनन्। त्यही ४५ वर्ष हाराहारीको पुरुषले भन्यो ‘तपाईँकी बहिनीलाई बिरामी भेटेर मैले उपचार गरिदिएको।’ रसिद नै देखाएर भन्यो ‘मेरो २९ हजार खर्च भएको छ।’
तर, तिनी को हुन् ? नन्दसँग सम्बन्ध के हो, कसरी भेटेको त्यतिबेला केही खुलेन।
काठमाडौँबाट पूर्वको गाडी चढेको थिएँ। पिप्ले भनेको राती ल्याएर भण्डारामा बसले ओरालिदियो। रातीमा बाटो चिनिन। वरपर मान्छे खोज्दा यिनै भेटिए। ‘भोलि घर पुर्याइदिउँला’ भनेर लगे। ‘भाउजूको घर टाढा छ भोलि पुर्याइदिउँला’ भनेर एउटा घरमा पुर्याए। पराल नै परालको घरमा लगेर हातखुट्टा बाँधेर राखे।’
उनले आफूलाई केही खान नदिएर पूर्ण सहित अरु तीन जनाले राती पालैपालो बलात्कार गर्ने गरेको भाउजूलाई बताइन्। आफू तामाङ भएपनि उनी तामाङ भाषा बुझ्दिनन्। चारै जनाले तामाङ भाषामा कुरा गर्ने गरेको पनि भाउजुलाई उनले बताएकी थिइन्। उनले बेलैमा किन नभनेको भन्दा ‘कसैलाई भनिस् वा भागिस् भने मारेर खोलामा फलिदिन्छौँ’ भनेको पनि बताएकी थिइन्।
भण्डारा बजारबाट करिब दुईसय मिटर भित्र भण्डारा माध्यामिक विद्यालयले खोलासँगैको आफ्नो जग्गामा माछा पोखरी खनेको थियो। माछाको रेखदेख र बिक्री गर्न तराइका एक परिवार नै त्यही दुई कोठे घरमा बस्ने गर्थे।
उनले देख्दा कौशिला थला परेको अवस्थामा थिइन्। शरीर हृष्टपुष्ट हुँदा उनले नदेखेको बताइन्। ‘ति नानी त्यही घरको पिँढीमा त्रिपाल ओच्छ्याएर बस्थिन्। तरर रगत बगेको हुन्थ्यो। वरिपरि जानै नसक्ने गरि गन्हाउँथिन्। पिँढीमा दिनभर सुतिरहेकी हुन्थिन्। बलेसीमा झरेर दिसा गर्थिन्।, कालिमायाले भनिन्, ‘एक दिन त बलेसीमा हरियो दिसा गरेको देखेँ। पानी तात्दैन भनेर मैले पनि पानीको बोतल त्यहीँ राखेको थिएँ। लिन जाँदा ‘आमा ६ दिन भयो, मैले केही खाको छैन, पैसा भए दिनु न’ भनिन्। मसँग त्यही दिनचाहिँ पैसा थिएन।’
परियारले थपिन्, ‘बुढाबुढी काम गर्न आको भन्थिन्। ‘तिमी बिरामी छौ, हेल्थ पोष्ट लगिदिन्छौँ’ भन्दा ‘जान्न मार्छ’ भन्थिन्। ‘माइती पिप्ले जाउ न त’ भन्दा पनि ‘मलाई मारिहाल्छन् नि’ भनेर मान्दै मानिनन्।’
त्यो घरको अवस्थिति देखेर शंका गर्न सकिन्छ, कौशिलालाई त्यो घरभन्दा अन्तै बन्धक बनाइएको थियो कि ?
गम्भीर अवस्थामा आकस्मिक कक्षमा ल्याइएकी कौशिलाको पहिले अस्पतालले स्त्रीरोग कक्षमा उपचार गरे। जाँचका क्रममा उनको पाठेघरमा नभइ पिसाब थैलीमा ढुंगा जमेको देख्यो। अवस्था निकै नाजुक भएकोले उनलाई अस्पतालले ओसीएमसी अन्तर्गत नै सबै जाँच त गर्यो तर, हिंसाबारे भने ख्यालै गरेन।
घटनाको प्रकृति हेर्दा र बन्धक बनाइएको भनिएको घरको अवस्था देख्दा उनलाई ७८ दिनसम्म त्यही घरमा राखिएको थियो भन्न सकिने अवस्था छैन। यता प्रहरी चाँहि सामूहिक बलात्कार हो होइन द्विविधामा रहँदा पीडितले मृत्यु नहुँदै भनेका बलात्कारमा संलग्न बाँकी तीन जना उम्किने पो हुन् कि ?